ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးအစည်းဝေး ကမ္ဘာ့လုံးဆိုင်ရာသတင်းဆု “ဆီးနှင်းရေခဲပြင် အားကစားဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ”အတွက် ပြိုင်ပွဲဝင်ဓါတ်ပုံများ စတင်ပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ် - Xinhua News Agency
ကမ္ဘာ့ သတင်းမီဒီယာ ထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းဆု “ဆီးနှင်းရေခဲပြင် အားကစား ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ”အတွက် ပြိုင်ပွဲဓါတ်ပုံများကို ဇူလိုင် ၈ ရက်မှစ၍ ပေးပို့နိုင်ပြီဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ယခုအကြိမ်ပြိုင်ပွဲကြီးသည် ဆီးနှင်းရေခဲပြင်အားကစား သက်ဝင်လှုပ်ရှားနေသည့် တဒင်္ဂပုံရိပ်များကို သတင်းမီဒီယာသမားများ မှတ်တမ်းတင်နိုင်မှုနှင့် ဆီးနှင်းရေခဲပြင်အားကစားပြည်သူအများ နှစ်ခြိုက်ပါဝင်မှုကို အားပေးရန်အတွက် ရည်ရွယ်ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးအစည်းအဝေးသည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ အရေးကြီးသည့်မီဒီယာများအား အဆင့်မြင့်ဆက်သွယ်ညှိနှိုင်းသည့် ပလပ်ဖောင်းတစ်ခု ဖြစ်ပြီး ၂၀၀၉ ခုနှစ် နိုင်ငံတကာ နာမည်ကျော် မီဒီယာဌာနများ အတူတကွ ဖွဲ့စည်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းဆုကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးအစည်းဝေးက ပုံစံမျိုးစုံရှိ မီဒီယာများအပါအဝင်၊ ကမ္ဘာလုံးလွှမ်းခြုံသည့် အထွေထွေသတင်းမီဒီယာပြိုင်ပွဲများအတွက် ထားရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုနှစ်ကျင်းပသည့် “ဆီးနှင်းရေခဲပြင်ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲ”ကို ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးအစည်းအဝေး ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ သတင်းဆု “”Truth, Objectivity and Excellence”ဟူသော ရည်ရွယ်ချက်ကို ရှေ့ဆက်ရန်အတွက် ကျင်းပခြင်းဖြစ်ကြောင်း ကမ္ဘာ့မီဒီယာထိပ်သီးအစည်းအဝေး အတွင်းရေးမှူးဌာန၏ မိတ်ဆက်ပြောကြားချက်များအရ သိရသည်။
ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲတွင် Action နှင့် Stories ဟူ၍ ဆုကြီးနှစ်မျိုး ခွဲထားပြီး ၎င်းအောက်တွင် Single Photos ဆု နှင့် Photo Series ဆု ဟူ၍ ထပ်မံခွဲထားသည်။ ထို့အပြင် ပြိုင်ပွဲကော်မတီက “အကောင်းဆုံးဓါတ်ပုံ” ဆုနှင့်” WMS Presidium Special Award”ဆု ဟူ၍ ထပ်မံထားရှိကြောင်း သိရသည်။
ပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်မည့် သတင်းဓါတ်ပုံများသည် ၂၀၀၉ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက် မှ ၂၀၂၁ ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက်အတွင်း ရိုက်ကူးသည့် ဓါတ်ပုံများဖြစ်ရမည်ကြောင်း သိရသည်။
ဆုရရှိသူများအတွက် ဂုဏ်ပြုလက်မှတ်နှင့် ဆုကြေးငွေများ ချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်ရာ ဓါတ်ပုံတစ်ခုတည်းက ဆုများစွာရရှိမည်ဆိုပါလျှင် ရရှိသည့်ဆုများအနက် အမြင့်ဆုံးဆုကြေးချီးမြှင့်ပေးမည်ဖြစ်သည်။ ဓါတ်ပုံပြိုင်ပွဲဆုကြေး များမှာ-
Best Photo：10,000 U.S. dollors.
Frist Prize: 6,000 U.S. dollors.
Nomination: 3,000 U.S. dollors.
WMS Presidium Special Award: 1,000 U.S. dollors.တို့ ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယခုပြိုင်ပွဲတွင် ပါဝင်မည့် ဓါတ်ပုံများကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် ဇူလိုင် ၈ ရက်မှ စက်တင်ဘာ ၁၀ ရက် အတွင်း ပေးပို့ရမည်ပြီး ဆုရလဒ်ကို ၂၀၂၁ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမတိုင်မီ ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမည်ဖြစ်သည်။ ပြိုင်ပွဲအသေးစိတ်အကြောင်းအရာများကို wms.news.cnကြည့်ရှုနိုင်ကြောင်း သိရသည်။ (Xinhua)
ရုရှားတိုက်လေယာဉ်က အမေရိကန် ကင်းလှည့်လေယာဉ် လေပိုက်နက်ထဲ ဝင်ရောက်လာမှုကို တားဆီး
မီးလောင်မှုဖြစ်ပွားသည့် ထိုင်းနိုင်ငံရှိ ဓာတုစက်ရုံ မီးငြှိမ်းသတ်နိုင်ပြီဖြစ်